Cayilka Badan Oo La Sheegay In Uu Nafaqo Darro Keeno |Tukesomalism.com | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdijabaar Sh. Axmed — June 14, 2016
Waxaa laga yabaa inaad in badan raadini jirtay siddii aad ku cayili lahayd. Waxaanu kawada marqaati nahay inay jiraan Soomaaliweyn badan oo aad u jecel inay cayilaan, wali waxaa la sheegaa dad badan oo isticmaalo kaniini si ay u helaan cayil. Meeqo qof oo Soomaali ah ayaad aragtay oo raadinaayo inay cayilaan. Dabcan waxaa wanaagsan marwalbo inaad wax badan wax ka ogtahay caafimaadka iyo dhibaatooyinka uu qoro. Caafimaadka waa sheyga cidwalbo oo Muslim ah ay raadinayso, ma jirtaa maanta cid aanan rabin caafimaad? Haddii haddii aad u malayni jirtay in cayilka qurux ama caafimaad leeyahay, hadaba ma ahan.
Daraasad cusub ayaa sheegtay in heerka cayilka badan ee dunida oo dhan ku sii kordhaya uu dhalinayo nafaqo darro baahsan. Makulla tahay in nafaqada daradda ay sidaas ku timid? Dad badan ayaa isweydiinaayo siddee macquul ku noqotay in qof sidaas u cayilsan ay ku dhacdo nafaqo daro.
Sida caadiga ah nafaqo darrada waxa loo haystaa inay macaluushu keento, laakiin warbixinta nafaqada adduunka ee sa nadkan 2016 waxay sheegtay in cayilka badan oo saameeya boqolaal milyan oo ruux uu laftiisu dadka ka dhigo kuwo nafaqo la’aan ah.
Tags: Cayilka Badan Oo La Sheegay In Uu Nafaqo Darro Keeno |Tukesomalism.com
Next post Shirkad Diyaaradeed oo Shareecadda Islaamka Adeegsan Jirtay Ayaa Shaqada Laga Joojiyay |Tukesomalism.com
Previous post Casharka 1aad Ee Gargaarka Degdegga |Tukesomalism.com